बच्चालाई सस्तो मकैको च्याख्ला खुवाऊने कि बजारिया महङ्गो कर्नफ्लेक्स? - Jagaran Post
बच्चालाई सस्तो मकैको च्याख्ला खुवाऊने कि बजारिया महङ्गो कर्नफ्लेक्स?
जागरण पोस्ट ८ मंसिर २०७८, बुधबार १५:५१
सस्तो मकैको च्याख्ला खाने कि महँगो कर्नफ्लेक्स खाने?आजभोलि धेरै अभिभावक आफ्ना बच्चालाई पत्रु खाना नदिने प्रयत्नमा त छन तर, भ्रमपूर्ण विज्ञापनकै कारण त्यस्तो खाना बच्चाहरूको दैनिक भोजनको हिस्सा बनिराखेको छ।
प्रोटिन, भिटामिन, मिनरल्स आदि रहेको भनिएका प्याकेट बन्द भएका कर्नफ्लेक्स लगायतका खानेकुरा बच्चालाई खुवाउँदा अभिभावक ढुक्क बन्छन्। तर, तिनमा के-कस्ता पदार्थ प्रयोग गरिएका छन् भन्नेबारे ध्यान दिएका हुँदैनन्।
वास्तवमा प्रशोधन नगरिएको अन्नमा शरीरलाई ऊर्जा प्रदान गर्ने सूक्ष्म पोषक तत्त्व हुन्छ। प्रशोधित अन्नबाट बनेका, उच्च मात्रामा चिनी भएका, कृत्रिम स्वाद, सुगन्ध र रङ्गहरू थपिएका खानेकुरा भने स्वस्थ होइनन्। त्यसैगरी बट्टाबन्द फलको रसमा पनि फलको स्वाद त हुन्छ, तर त्यो स्वस्थ नहुन सक्छ। प्याकेटको नास्ता जस्तै हो यो पनि।
अहिले संसारमै आधुनिक खाना खाने प्रचलन आइसक्यो। नयाँ पुस्ताको खाने शैली र संस्कृति हजुरबुबा-हजुरआमाको भन्दा धेरै फरक छ। व्यस्त जीवनशैलीका कारण हामी पकाउन नपर्ने वा छिटो पकाउन मिल्ने विकल्प खोज्दै छौं ।
दुःखलाग्दो कुरा, हामी सानो छँदा खाजामा सिङ्गै मकै पोलेर वा उसिनेर खान्थ्यौं, तर अहिलेका बच्चाहरूमा कर्नफ्लेक्स खाने चलन बढेको छ। विज्ञापनको पछि नलागौं।
थालीमा तरकारी कि मासु ? पाप र धर्मको बहस
आइरन चक्की बाँडेर मात्र समाधान हुँदैन भन्ने कुरा हाम्रो मन्त्रालयले कहिले बुझ्ने होला?
फिस्टुला : लुकाउनै नसकिने महिलाहरूको व्यथा
हामीले कस्ता खाद्य पदार्थ किन्ने अनि भान्सामा कस्ता कुरा पकाउने त? टीभी र रेडियोमा देखिने र सुनिने विज्ञापनबाट प्रभावित भई खाद्यवस्तु नकिनौं। प्याकेटका सबै खाद्य पदार्थ अस्वस्थ हुन्छन् भन्ने चाहिं होइन। हिजोआज दाल, गेडागुडी, तिलको लड्डु, घिउ आदि पनि प्याकेटमा आउँछन्। यी स्वादिला र स्वस्थकर खाना हुन्।
किनमेल गर्दा आफ्नो मूल रूपमा भएका खाना छानौं। जस्तै- अम्बाको रसको साटो अम्बा। बालबालिका र आफ्नो पोषणका लागि बट्टाको भन्दा दूध, दाल, अण्डा, सागपात, तरकारी, मही जस्ता घरकै खाना खाऔं। यसो गर्दा स्वास्थ्य र पैसा दुवै जोगिन्छ।
पहिलेकै जसरी स्वस्थकर कोदो र फापरलाई भोजनको हिस्सा बनाऔं। पहिले मौसम अनुसारको खाना हुन्थ्यो। स्थानीय रूपमा उत्पादित खानेकुरा खाइने भएकाले त्यो सस्तो र स्वस्थ दुवै हुन्थ्योे। खाना घरमा प्रायः ताजा पकाइएको हुन्थ्यो।
खानाका नामले पनि भ्रमित भइराखेका हुन्छौं हामी। स्वस्थकर भनेर खैरो पाउरोटी खोजिरहेका हुन्छौं। अप्रशोधित गहुँबाट बन्ने यस्तो पाउरोटी तुलनात्मक रूपमा बढी पौष्टिक हुन्छ। तर, खैैरो देखिने सबै पाउरोटीमा अप्रशोधित गहुँ नहुन सक्छ। त्यसमा खैरो रङ्ग मात्रै हालिएको पनि हुन सक्छ।
परम्परागत खाना नै बढी लाभदायक हुने विभिन्न अध्ययनले पुष्टि गरेका छन्। त्यसैले अहिले हजुरबुबा-हजुरआमाकै वेलाको जस्तो खाना जुटाउन सकिंदैन भने पनि स्वस्थ र प्याकेटका सबै खाद्य पदार्थ अस्वस्थ हुन्छन् भन्ने चाहिं होइन। हिजोआज दाल, गेडागुडी, तिलको लड्डु, घिउ आदि पनि प्याकेटमा आउँछन्। यी स्वादिला र स्वस्थकर खाना हुन्।
तर, प्याकेट खोलेर तुरुन्त खान मिल्ने आलु चिप्स, बिस्कुट, चाउचाउ जस्ता सामग्रीमा भने अत्यधिक नुन/चिनी र रसायन मिसाइने भएकाले अस्वस्थकर हुन्छन्। त्यसैले के खाने भन्ने निणर्य गर्दा खानाको पोषण-मूल्यलाई सधैं विचार गरौं।
स्रोत : डा. अरुणा उप्रेती//
धूमपान गर्ने लोग्नेले धूमपान नगर्ने पत्नीलाई चुरोटको धुँवा
माओवादी नेता वर्षमान पुन जण्डिसबाट पीडित, उपचारका लागि
दक्षिण अफ्रिकामा नयाँ स्वरूपको कोरोना भाइरस फेला
थप ३०८ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि, २९८ जना
जाजरकोटको जिल्ला अस्पतालमा अक्सिजन उत्पादन सुरु
थप ३३२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, चार जनाको
पिसिएल नर्सिङ अध्यापनका लागि ४५ वटा कलेजले पाए
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्सको परीक्षा पुसमा हुने